पोखरा र वीरगञ्जमा महालक्ष्मीका २ शाखा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक थप दुइ स्थानमा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले असोजमा १४ कास्कीको, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका– ३०, स्थित सिसुवा शाखा स्थापना गरेको हो । त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका– १२ श्रीपुरमा शाखा स्थापना गरेका बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिसुवा शाखाको उद्घाटन उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारीले गर्नुभएको थियो भने श्रीपुरमा विरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले शाखा औपचारिक उद्घाटन गरे । सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले बैंकले ग्राहकको सेवालाई सम्बोधन गर्दै आएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा बैंकले अझै उत्कृष्ट सेवा दिने बताए । बैंकिङ्ग सेवामा नेपाली जनताको पहुँच बढाउन बैँकले शाखा विस्तारको क्रमलाई निरन्तर अघि बढाइरहने उनले बताए ।
महालक्ष्मी बैंकले देशभर ७६ ओटा शाखा तथा ३५ ओटा एटिएमहरुमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकका ग्राहकको संख्या ४ लाख ९० हजार भन्दा बढी रहेको छ । महालक्ष्मीको चुक्ता पुँजी रू. २ अर्ब ६३ करोड रहको छ भने बैंकले हालसम्म करिब रू. २६ अर्ब ३४ करोड निक्षेप संकलन गरी रू. २२ अर्ब २३ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
प्रकाशित १८ आश्विन २0७५ , बिहिबार | 2018-10-04 09:08:01
रुपन्देहीमा महालक्ष्मीका दुई शाखा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा रुपन्देही जिल्लामा दुई नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले जिल्लाको रोहिणी
जनसेवी र स्वाबलम्बलनको आइपीओ
काठमाडौं । आज शुक्रबारदेखि दुईवटा लघुवित्त संस्था जनसेवी र स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)
महालक्ष्मीको आमा सम्मान
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको डडेलधुरा शाखाले मातातीर्थ औसीँको अवसरमा जेष्ठ नागरिक आमाहरूलाई लत्ताकपडा तथा फलफूल वितरण गरेको
महालक्ष्मी विकास बैँकद्वारा कृत्रिम
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको वीरगञ्ज शाखाले दुर्घटनमा हात गुमाएका अपांगलाई कृत्रिम हात प्रदान गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रम